I-ChimeraOS: I-Ideal GNU / Linux Distro Yemidlalo Yekhompyutha ene-Steam | Kusuka kuLinux
I-ChimeraOS: I-Ideal GNU / Linux Distro yemidlalo yekhompyutha ene-Steam
Ukufaka kwe-Linux Post | | Ukusatshalaliswa, Izaziso
Abanye Ama-Console nabadlali bekhompyutha imvamisa baphupha nge ipulatifomu enobunye lokho kubavumela ukuba badlale imidlalo yabo yesimanje noma ye-retro. Futhi impela, indlela ngalowo mqondo ibingelula. I-Steam neyakhe Uhlelo Lokusebenza lwe-SteamOS okungakaqedi ukufika nokuphumelela, okungenani, kukhombise indlela yokukwazi ukudlala zonke izinhlobo zemidlalo emisha nemidala mayelana GNU / Linux. Nokho, namuhla sizokhuluma «I-ChimeraOS».
Futhi kungani iChimeraOS? Hhayi ngoba lokhu I-Arch-based GNU / Linux distro ene-Steam edidiyelwe, inikeza i okunye okuthakazelisayo Ukuhlolwa ngabaningi bamaGamers ukubona ukuthi bangabona kangakanani iphupho labo ligcwaliseka.
Futhi njengokujwayelekile, ngaphambi kokungena kwi-GNU / Linux Distro «ChimeraOS», sizobuyela esandleni, okuyigugu lethu Uhlu lwe-GNU / Linux Distros olungele ukudlala, esake sakushicilela kokuthunyelwe kwethu okuhlobene okwedlule okubizwa ngokuthi: «Shintsha i-GNU / Linux yakho ibe yiDistro Gamer yekhwalithi«. Lokhu kusatshalaliswa kudalwe ngenhloso yokunikeza isipiliyoni semidlalo esezingeni eliphakeme. Futhi phakathi kwalokhu kukhona okulandelayo:
ISparkyLinux 5.3 GameOver
Uhlelo lweManjaro Gaming Edition
I-Game Drift Linux
Nota: Ngayinye iyahlukahluka ezinzuzweni nasekusebenzeni kwayo, ngakho-ke ukuncoma eyodwa kuzoya kakhulu kunambitheka yomuntu ngamunye yomuntu ngamunye. Okuhle kakhulu esivele kunqanyuliwe kwaba Dlala i-Linux. Ukukhulunywa okukhethekile kune Lakka ngoba iyi-Distro enhle kakhulu ongayifaka kuhlobo lwama-microcomputer I-Raspberry PI, njengoba kuxoxiwe ku indatshana edlule kuDesdeLinux.
Shintsha i-GNU / Linux yakho ibe yiDistro Gamer yekhwalithi
1 I-ChimeraOS: I-GNU / Linux + I-Steam Big Picture
1.1 Yini iChimeraOS?
1.3 Ulwazi oluningi
I-ChimeraOS: I-GNU / Linux + I-Steam Big Picture
Ngokusho Konjiniyela wayo ku- Iwebhusayithi esemthethweni, ichazwa ngale ndlela elandelayo:
"Uhlelo olusebenzayo lwemidlalo yekhompyutha olususelwa ku-Steam Big Picture. Lokho okungukuthi, uhlelo olusebenzayo olunikeza isipiliyoni semidlalo yekhompyutha ngaphandle kwebhokisi. Njengoba, ngemuva kokufakwa, iqala ngqo ku-Steam Big Picture, ngaleyo ndlela ivumele noma ngubani ukuthi aqale ukudlala imidlalo ayithandayo, yesimanje noma i-retro, esekelwa yi-Steam."
Ngaphezu kwalokho, engeza okulandelayo kuyo:
"IGamerOS inezici iSteamOS engeke ikwazi ukuziphindaphinda, ngenxa yemikhawulo engeyona eyezobuchwepheshe, kepha yezepolitiki. Futhi ivumela noma ngubani ukuthi ajabulele isipiliyoni sokudlala se-console esingahlanjululwa, ngaphandle kokunye ukumiswa onakho. IGamerOS izokusiza ukuthi ujabulele imidlalo yakho oyithandayo kukhompyutha yakho, njengoba nje yenzile nami."
Phakathi kwakhe izici ezivelele singasho okulandelayo:
Kulula ukuyifaka: Ikuvumela ukuthi uqalise ohlelweni olusha lokudlala ngendaba yemizuzu
ngokususelwa kuhlelo lokusebenza olunamandla olusebenzisa uhlelo lwewebhu oluhlanganisiwe ukufaka nokuphatha imidlalo kunoma iyiphi idivayisi.
Faka ubuncane obungenalutho: Inikeza kuphela lokho okudingekayo ukudlala hhayi okunye. Futhi-ke, ilungele ukusetshenziswa futhi ingaqalwa ukudlala ngokushesha ngaphandle kwesidingo sokulungiselela imidlalo ehambisanayo.
Njalo kusesimweni: Kufaka izibuyekezo ezijwayelekile nezishayeli ezishumekiwe zakamuva nesoftware. Ngaphezu kwalokho, lezi zibuyekezo ziza ngokuzenzekelayo, bese zisebenza ngemuva ngaphandle kokuphazamisa umdlalo.
Ukuhambisana okuhle kakhulu nabalawuli begeyimu: Ngenxa yokusebenzisana kwayo okuhambisana ngokuphelele nezilawuli, okukuvumela ukuthi usebenzise noma yikuphi ukulawula. Futhi inikeza ukuhambisana okuhle nabalawuli be-Xbox, PlayStation kanye ne-Steam, phakathi kwabanye, ukuze bakwazi ukudlala noma yimuphi umdlalo kalula, kungaba bevela eSteam, Epic Games Store, GOG nakwamanye amapulatifomu amaningi we-console.
para imininingwane ebuyekeziwe cishe «I-ChimeraOS» ungavakashela i- isiza esisemthethweni ku-GitHub, ikakhulukazi eyakhe I-Wiki / FAQ lapho bachaza khona izinto eziningi ngemvelaphi nokusebenza kwawo. Ngenkathi, uma ufuna ukukubona ngqo lokho imidlalo iqinisekisiwe ukuze idlalwe ngaphandle kwezinkinga kuyo, okulandelayo kungahlolwa ngqo isixhumanisi.
Ngokufingqa, «I-ChimeraOS» Kunjengoba ubona futhi okokuqala, enye indlela enhle yokwenza Uhlelo Lokusebenza Lomphungaubizile "I-SteamOS" lokho akukaze kufinyelele kumaDeski wamakhompyutha ethu ngamandla. Futhi-ke, enye indlela ethokozisayo kwabanye I-GNU / Linux Distros ilungele amaGamers asezingeni eliphakeme okudinga ukufakwa okuyisidina futhi okunzima, ukumiswa nokulungiselelwa kwe- uhlelo lokusebenza lwe-steam ukuze bakwazi ukudlala imidlalo yabo ye-hip.
Ekugcineni, siyethemba ukuthi le ncwadi izosiza kakhulu kuwo wonke umuntu «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekuthuthukisweni, ekukhuleni nasekusakazweni kohlelo lokuphilayo lwezinhlelo zokusebenza ezitholakalayo «GNU/Linux». Futhi ungayeki ukuwabelana nabanye, kumawebhusayithi wakho owathandayo, iziteshi, amaqembu noma imiphakathi yokuxhumana nabantu noma amasistimu wokuthumela imiyalezo. Ekugcineni, vakashela ikhasi lethu lasekhaya ku- «KusukaLinux» ukuhlola ezinye izindaba, bese ujoyina isiteshi sethu esisemthethweni se- Yocingo kusuka ku-DesdeLinux.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » I-ChimeraOS: I-Ideal GNU / Linux Distro yemidlalo yekhompyutha ene-Steam
Isikhulu esiphezulu sePaul Cormier iRed Hat, Inc. kusho
Indatshana enhle kakhulu. Kuzofanele sihlole lolu hlelo lokusebenza…. Imvamisa ngiwumlandeli weFedora, kepha izinketho eziningi ziba ngcono
Phendula ku-Paul Cormier CEO iRed Hat, Inc.
Ngiyabingelela, Paul. Siyabonga ngokuphawula kwakho futhi yebo, okuhle ukuzama ukubona ukuthi kusebenza kanjani bukhoma kukhompyutha.
I-AutoKey: Ithuluzi lokuzenzekelayo eliwusizo le-GNU / Linux
Quake: Idlalwa kanjani i-FPS Quake1 ngeQuakeSpasm ku-GNU / Linux?